आमालाई एक्लै छोडेर गए सिद्धार्थ, जो विना एक सेकेण्ड पनि बस्न सक्दैनथे ! | समाचार
आमालाई एक्लै छोडेर गए सिद्धार्थ, जो विना एक सेकेण्ड पनि बस्न सक्दैनथे !
September 6, 2021 NepstokLeaveaComment on आमालाई एक्लै छोडेर गए सिद्धार्थ, जो विना एक सेकेण्ड पनि बस्न सक्दैनथे !
काठमाडाैं । बिग बोस सिजन १३ का विजेता सिद्धार्थ शुक्ला सधैँका लागि यो संसार छोडेर गइसकेका छन् । ४० वर्षका सिद्धार्थको हृदयघातका कारण निधन भएको हो । सिद्धार्थ आफ्नी आमाको निकै नजिक थिए । आमा विना एकछिन पनि बस्न सक्दैन थिए । उनले केही समय पहिले आफ्नी आमाको लागि मन छुने पोस्ट लेखेका थिए ।
उनले पोष्टमा आमासँग आफ्नो सम्बन्धबारे कयौँ कुरा खोलेका थिए….,
मानिसहरु मलाई यस्तो व्यक्तिका रुपमा चिन्दछन्, जो बाहिर निकै रफ देखिन्छ । तर एक व्यक्तिका लागि म सधैँ कोमल हुन्छु, ती हुन् मेरी आमा । उनको अगाडी म पग्लिहाल्छु । मेरी आमा जन्मदेखि नै मेरो लागि विशेष छिन् । तीन सन्तानमध्ये म सानो थिएँ र दिदीहरुसँग खेल्न पाउँदैनथेँ । त्यसैले म सधैँ आमाको वरिपरि नै घुमिरहन्थेँ ।
त्यसैले जब मलाई शो मा उनको एक चिठ्ठी मिल्यो तब मलाई उनको आवाज सुन्न मन लागेको थियो । मलाई उनी मेरै वरिपरि भएजस्तो महसुस भइरहेको थियो । उनी हरेक पटक मप्रति गर्व गर्छिन्, यो मेरो सबैभन्दा ग्रेट फिलिङ्गस हो ।
म संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई । किनकी म आमाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सफल भएको थिएँ । उनी मेरो सबथोक हुन् । आज पनि मेरी आमा मलाई सल्लाह, सुझाव दिइरहन्छिन् । जब मैले ३ महिना लामो समयपछि उनलाई बिग बोसको सेटमा देखेको थिएँ, तब उनले मलाई हरेक समय छोटो लगाउन बन्द गर, जिन्स लगाऊ भनेकि थिइन् ।
आज भाग्यले यस्तो खेल खेलेको छ कि आमासँग दुई मिनेट पनि टाढा बस्न नसक्ने सिद्धार्थ सधैँका लागि उनलाई छोडेर गएका छन् !